Nayakhabar.com: मक्का क्रेन दुर्घटना भगवानको मर्जीले भएको, भन्छन् ईन्जिनियर !
मक्का क्रेन दुर्घटना भगवानको मर्जीले भएको, भन्छन् ईन्जिनियर !
साउदी अरबियाका राजा सल्मान शनिबार कुन करणले घटना घट्यो भनी बुझ्न घटना स्थलमा पुगेका थिए, जसका करण १०७ जनाले ज्यान गुमाउनु परेको थियो, हज जुन मुस्लिम धर्मको एउटा खम्बा जस्ले पछील्लो बर्ष २० लाख भक्तलाई तानेको थियो । सल्मानले भने " यो घटनाको पछीका सबै करणको छनबिन गरिने छ त्यस्पछी सर्वसाधारणलाई सुचना दिईनेछ"
आझै पनि मस्जिदका केही भागलाई सिल्बन्दी गरिएको छ जसका कारण थप दुई सय जना घाईते भएका थिए । मक्का अन्तर्गतको ईस्लामिक रिसर्च फाउन का सह - संस्थापक इर्फान् अल अल्वीले घटनाको मुख्य करण मक्का सँग सम्बन्धित अधिकारीहरुको लापरवाहीहो भनि तोकेका छन्।
तर, साउदी बिनलादेन ग्रुपका एक ईन्जिनियरका अनुसार " क्रेनलाई एकदमै पेसेवर तरिकाले लगाईएको थियो, र यसमा कुनै टेक्निकल गड्बडी थिएन"
"यो घटना भगवानको मर्जीले भएको हो ", उनले भने ।